Yesaia 56 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ahɔho ne mmarima a wɔasa wɔn no benya nhyira (1-8)
Aman nyinaa mpaebɔ fie (7)
Awɛmfo anifuraefo ne nkraman mum (9-12)
56 Nea Yehowa aka ni: “Mummu atɛntrenee+ na monyɛ adetrenee.Efisɛ ɛrenkyɛ, me nkwagye bɛbaNa meyi me trenee adi.+ 2 Anigye ne onipa a odi eyinom so,Ne onipa dasani a okura mu denneennen,Na odi Homeda a ongu ho fĩ,+Na ɔhwɛ ne nsa yiye na wanyɛ bɔne biara. 3 Ɔhɔho a waba Yehowa nkyɛn no,+ ɛnsɛ sɛ ɔka sɛ,‘Sɛnea ɛte biara Yehowa beyi me afi ne nkurɔfo mu.’ Na ɛnsɛ sɛ ɔbarima a wɔasa no ka sɛ, ‘Hwɛ! Meyɛ dua a awu.’” 4 Efisɛ nea Yehowa aka akyerɛ mmarima a wɔasa wɔn a wodi me homeda na wɔpaw nea mepɛ na wokura m’apam mu denneennen ni: 5 “Mɛma wɔn nkaedum ne edin wɔ me fi ne m’afasu mu,Biribi a ɛsen mma mmarima ne mma mmea. Mɛma wɔn edin a ɛwɔ hɔ daa,Nea ɛrensɛe da. 6 Na ahɔho a wɔaba Yehowa nkyɛn sɛ wɔrebɛsom noNa wɔadɔ Yehowa din,+Na wɔayɛ n’asomfo,Wɔn a wodi Homeda a wongu ho fĩNa wokura m’apam mu denneennen nyinaa no, 7 Me nso mede wɔn bɛba me bepɔw kronkron no so+Na mama wɔadi ahurusi wɔ me mpaebɔ fi. Wɔn hyew afɔre ne wɔn afɔre ahorow nyinaa, wobegye wɔ m’afɔremuka so. Na wɔbɛfrɛ me fi mpaebɔ fi ama aman nyinaa.”+ 8 Nea Awurade Tumfo Yehowa a ɔreboaboa Israelfo a wɔahwete ano no+ aka ni: “Mɛboaboa nnipa foforo ano aka ne nkurɔfo a maboaboa wɔn ano dedaw no ho.”+ 9 Wuram mmoa nyinaa, kwae mu mmoa nyinaa,Mommra mmedidi.+ 10 N’awɛmfo yɛ anifuraefo.+ Wɔn mu biara nnim nea ɛrekɔ so.+ Wɔn nyinaa yɛ nkraman mum; wontumi mpow.+ Wɔhome hahyeehahyee, na wɔdeda hɔ; nea wɔpɛ ara ne sɛ wɔbɛtɔ nko. 11 Wɔyɛ nkraman a wɔpɛ aduan paa;*Wodidi a wɔmmee. Na wɔyɛ nguanhwɛfo a wonni ntease.+ Obiara afa ɔno ara ne kwan so;Wɔn mu biara pɛ mfaso bɔne, na wɔka sɛ: 12 “Mommra, momma memfa nsã* kakra mmra,Na momma yɛnwe nsã.*+ Ɔkyena bɛyɛ sɛ nnɛ; ɛbɛyɛ dɛ koraa akyɛn nnɛ!”
^ Anaa “nkraman a wɔn kra yɛ den.”
^ Anaa “nsã a ɛbow.”